I-OpenSea yokufumana ixabiso leebhiliyoni ezili-10 zeedola njengabatyali-mali "Isimangalo" seSiqwenga sokuQala
NgoLwesithathu, ingxelo iveze ukuba i-behemoth non-fungible token (NFT) indawo yentengiso, i-OpenSea, ifumana unikezelo olutsha lotyalo-mali, ngokutsho kwemithombo emibini engaziwayo eyaziyo ngesihloko.
Oko kuthethiweyo, ukunyuka okutsha kotyalo-mali kunokudubula ixabiso lemakethi ye-OpenSea ngokuphindwe kathandathu kuqikelelo lwayo lwangoku, i-10 yeebhiliyoni zeedola.
Kwiveki yokuqala kaNovemba, indawo yentengiso enkulu ye-NFT idlule i-10 yeebhiliyoni zeedola kwintengiso yexesha lonke, ngokutsho kwe-dappradar.com. Ngexesha lokushicilela, iqonga lokuhlalutya libonisa ukuba intengiso ye-OpenSea yonke ixesha ibethe i-11.11 yeebhiliyoni zeedola.
Imithombo engaziwa yenza isityhilelo kwi-theinformation.com's Kate Clark kunye noBerber Jin, bephawula ukuba indawo yentengiso ye-NFT ayizange. “qalisa” inkxaso-mali, ukongeza oko "Abatyali-zimali bafuna iqhekeza lokuqalisa."
I-OpenSea iba yi-Unicorn Startup ngoJulayi
Oko kuthethiweyo, amahemuhemu okunyusa ingxowa-mali eza emva komjikelo wamva nje wenkampani wokunyusa ingxowa-mali ngoJulayi. Inkampani ikhulise i-100 yezigidi zeedola kumjikelezo wotyalo-mali okhokelwa ngu-Andreessen Horowitz kunye nabanye abatyalo-mali abadumileyo njengoTobi Lutke, uKevin Durant, kunye no-Ashton Kutcher. Umjikelo wotyalo-mali kaJulayi Series B wadubula i-OpenSea ukuya kwimo "ye-Unicorn" ngexabiso le-1.5 yeebhiliyoni zeedola.
Ulwazi lwangaphakathi oluvela kwimithombo engachazwanga kutyholwa ukuba abatyali-mali "uyakhwaza" ukutyala imali kwi-OpenSea. Abanolwazi baphinde baqaphela ukuba inani leentengiso ezirekhodwe kwindawo yentengiso enkulu linoxanduva lokunyuka kokungena kwabaTyali-mali.
Nangona kunjalo, idatha evela kwiDune Analytics icebisa ukuba umthamo worhwebo wehle ngokulandelelanayo ukusukela ngo-Agasti.
I-OpenSea ixhasa i-Ethereum kunye nePolygon blockchains kwaye ngoLwesithathu yazisa izicelo ze-OpenSea zeselula ze-Android kunye ne-iOS. Ngelixa umthamo we-OpenSea kwi-blockchain ye-Ethereum yehla ngo-Okthobha, umthamo wayo kwiPolygon yabona ukwanda okukhulu. Nangona kunjalo, ivolumu ye-OpenSea kwi-Ethereum inyuke ngokukhawuleza kwiveki yesibini kaNovemba.
tags block Chain, iindaba, I-NFT, VulaSea